क्यामराको अगाडि सेक्स गर्ने जोडीलाई कलेजले दिनेछ पैसा, तर…
भलै तपाइँलाई सुन्दा अपत्यारिलो लाग्ला तर यो सही कुरा हो । अब जोसुकै जोडीले क्यामराको अगाडि यौन सम्पर्क गर्न राजी हुन्छन् भने उनीहरुलाई विश्वविद्यालयले निश्चित रकम प्रदान गर्नेछ ।
आखिर यसरी दुनियाँलाई क्यामराको अगाडि सेक्स गराएर पैसा तिर्नुमा विश्वविद्यालयको के स्वार्थ छ होला ? अनि यस्तो
दुनियाका १० अनौठा पुल (फोटोसहित)
दुनिया भौतिक निर्माणको क्षेत्रमा धेरै अघि बढिसकेको छ । विश्वमा कल्पना समेत गर्न गाह्रो पर्ने खालका अनुपम भौतिक संरचनाहरु ठडिइरहेका छन् । आज हामीले यस्ता १० वटा अनौठा पुलहरु देखाउँदै छौँ जसको तस्वीर मात्र हेर्दा पनि तपाइँले वाह भन्नुहुनेछ ।
रक्सीको सुरक्षाका लागि आयो वाइन कण्डम (भिडियो सहित)
हो, वाइनलाई सुरक्षित राख्नका लागि वाइन कण्डमको प्रयोग गरिन्छ । वाइनको बोतल
बिरामीको पेटकाे ग्यासले अपरेशन थिएटरमा आगो सल्कियो
अस्पतालमा शल्यक्रिया गरिरहेका बेला एक महिलाले छाडेको अपान वायुमा आगो सल्किएको छ। अागो लागेर ती महिला घाइते बनेकी छिन् ।
जापानको टोकियो मेडिकल युनिभर्सिटी अस्पतालमा यस्तो अनाैठाे घटना भएको हो । ३० वर्ष उमेरकी बिरामीको प्रजनन अंगमा लेजर अपरेशन भैरहेका समयमा उनले अपान वायु
मानिसको हातखुट्टामा गरी जम्माजम्मी २० औँला हुन्छन् । तर भारत बिहारस्थित गया जिल्लाको एक गाउँमा भने एउटा परिवारका सबै २५ जना सदस्यका २४ वटा औँला छन् ।
२५ जना सदस्य रहेको उक्त संयुक्त परिवारका सबै सदस्यहरुका हात र खुट्टामा १२।१२ वटा औँला रहेका छन् ।
परिवारका सदस्य ५० वर्षका कृष्ण चौधरी आफ्ना
भारु नचलेपछि डिजिटल चिया
भारतमा ५ सय र एक हजार दरका नोटको नोटबन्दीसँगै धेरै मानिसको व्यापार व्यवसाय तथा कारोबार ठप्प भएको छ । तर दिल्लीको ओखलाका एक अपांग चायवालाले भने आफ्नो बुद्धि लगाएर नोटबन्दीको मौका छोपी चियाको व्यापार चम्काएका छन् । नोटबन्दीले पिरोलीरहेका बेला उनले आफ्नो कारोबारलाई डिजिटलाइजेसन गरेका छन् ।
न्यायो यौनांग सहितको सेक्स रोबोट आउँदै
नयाँ पुस्ताको यस्तो यौन खेलौना पूरै रोबोटको रुपमा हुनेछ, अविश्वसनीय
पैसामात्र हैन, सुन पनि निकाल्छ एटिएमले
हामीमध्ये धेरै जना एटिएम(अटोमेटिक टेलर मेसिन) चलाउन अभ्यस्त छौं । विश्वव्यापी रुपमै मानिसहरु कार्ड घुसारेर पैसा निकाल्न बानि परेका छन् । तर, के तपाईंलाई थाहा छ एटिएमको पिन नम्बर सँधै चार अक्षरको किन हुन्छ ? एटिएमबाट सबैभन्दा बेसी पैसा के बार निकालिन्छ होला ? एटिएमको विषयमा यी र यस्तै रोचक जानकारीहरु
इन्गेजमेन्ट भएको ६३ वर्षपछि बल्ल भयो बिहे
सामान्यतया इन्गेजमेन्ट भएको केही महिनामै बिहे हुन्छ । तर एक बेलायती जोडीले भने आफुहरुको इन्गेजमेन्ट भएको ६३ वर्षपछि बल्ल बिहे गरेका छन् । बिहे गर्दा दुलहीको उमेर ८२ वर्ष र दुलाहाको उमेर ८६ वर्ष पुगिसकेको छ ।
यो जोडीको कथा निकै मार्मिक छ । इन्गेजमेन्ट भएको ६३ वर्षमा बल्ल एक आपसमा बिहे गर्ने यी
कर्नाटकको गुलबर्ग जिल्लामा रहेको लकम्मा देवीको मन्दिर छ । त्यहाँ हरेक वर्ष